Software uye Zvishandiso Ini Handikwanise Kurarama Pasina | Martech Zone
Software neMidziyo Ini Handaigona Kurarama Pasina
Chishanu, December 25, 2009 Muvhuro, Ndira 1, 2018 Lorraine Bhora
kuverenga Chinyorwa chaDoug izvo zvakaita kuti ndifunge nezvese maficha andauya kuzovimba sechikamu chemabatiro andinoita bhizinesi rangu uye nehupenyu hwangu. Dzakati wandei, Tungle uye Dropbox, Doug atotaurwa. Asi heino runyorwa rwevamwe vashoma vandisingafungidzire hupenyu vasina:
WebNotes - Ichi chikamu chakakosha mukutsvaga kwangu kwewebhu. Kunyangwe ndiri kuedza kutsvaga ruzivo rwechirongwa chevatengi, kurudziro yeblog blog, kana kuteedzera mhedzisiro yePR mushandirapamwe, WebNotes inondibvumidza kutora uye kuronga ruzivo neepost-it-manotsi uye anosimbisa. Uye chikamu chakanakisa ndeye chishandiso chizvarwa chishandiso. Kana tabatana pamwe neAutomatic Google Alert, tinotaridza sekunge takapedza maawa tichitsvaga pawebhu uye tichigadzirira chirevo chepfupiso!
KeroTwo - Kupfuura bhuku rekero, ichi ichokwadi CRM chishandiso. Ini ndashandisa akaverengeka epa data mabheseni pamusoro pemakore maneja angu ekubata, Kuwana (ini ndakavaka yangu ndega, mukomana aive iyeye geeky), ACT neAptlook uye ini ndinoona iyi inokodzera ini zvakakwana. Webhu yakavakirwa, ndinogona kugovana vandinosangana navo nechikwata changu chose. Isu tinogona kubata maneja uye mapurojekiti neakavakirwa mune runyorwa rwebasa Zvakare, ndiri kufamba zvishoma nezvishoma kubva kuConstantContact kuenda kune YekutauraTwo email chishandiso. Kunyangwe ichiganhurirwa zvishoma kubva dhizaini uye chimiro chekuburitsa, ini ndinoda kugona kubvunza iyo data base, kuona chete iro chairo boka, uye kuendesa yakakodzera meseji.
Ini ndinodawo kugona kutumira email Addy nemazita evanhu vandiri kuda kuisa mune yangu data base kana kuzivisana kune mumwe nemumwe uye anoitarisira (Hongu ndinoziva kuti haasi munhu chaiye, asi dzimwe nguva anondiitira zvakawanda kupfuura mushandi chaiye, saka zvakaoma kusafunga nezvake semunhu)
Audacity - Vanhu vanondiziva mushe vanowana zvisingaite zvinosetsa kuti ini ndinowana raramo yangu semunyori, nekuti ini handisi munyori. Ndiri mutauri! Semutauri, ndakafadzwa nepfungwa yekuwedzera podcast ku blog yangu uye Audacity yaita kuti zviitike. Nenguva shoma shoma yatorwa, ini ndafamba kubva paanovice kuenda mukugadzirisa pro. Ini handikwanise kugadzirisa kunze kunyangwe idiki um, er kana kufona kukanganiswa. (Kunyangwe dzimwe nguva ini ndinovasiya mukati, nekuda kwekuti vanowedzera hunhu).
Ini ndinoda iyo iyo podcast yevhiki nevhiki inoderedza huwandu hwekunyora ini hwandinofanira kuita, asi kune zvimwe zvakanaka zvakare. Iwo mapurogiramu anondipa chikonzero chekukoka shamwari mune yechirongwa chekurekodha uye kushanya. Izvozvi zvandakadzidza kubata kune tekinoroji, kurekodha kunotora maminetsi mashoma, saka isu tine nguva yekubata uye kutaura nezve zvimwe zvinhu!
Aya mafomu matatu aive matsva kwandiri muna 2009. Zvinoshamisa kuti nekukurumidza sei tekinoroji nyowani inova chikamu chehupenyu hwako. Ini handikwanise kumirira kuti ndione zvandinowana gore rinouya!
Tags: kero mbirikusimbadenderedzwamidziyozvinyorwa zvewebhu
Iyo Zvishandiso neApplication izvo zvinondichengeta Ini muBhizinesi
Kudonhedza iyo Super Bowl yeDhijitari Midhiya
Dec 25, 2009 pa 11: 44 AM
Zvinonakidza kuona kufanana pakati pedu, Lorraine! Ini handina kuyedza KeroTwo kunze asi CRM inogona kunge iri mune rangu ramangwana.
Zvita 25, 2009 na12: 43 PM
Chii chavanotaura nezve pfungwa huru?